Gelitaanka Blog-kaaga "A-List" | Martech Zone
Khamiis, Agoosto 17, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Hagaag, hadaan halkaan kuleeyahay, ha waalin oo iskaga tag. Dhegeyso waxaan kuu sheegayo.
Waxaa jira olol ka socda guud ahaan barta blogga ee hadda ku saabsan dhajinta Blog Nicholas Nicholas, Akhriska Weyn. Sheel Israa'iil wuxuu ku jiraa doodda, sida tan oo kale oo ah qorayaasha kale (tusaale ahaan).
Waa inaad aqriso Mudane Carr boostadiisa oo buuxda kahor intaadan aqrin waxa aan dhahayo. Waxaan rajaynayaa inaan si cadaalad ah ugu gudbiyo farriintiisa… Waxaan u malaynayaa waxa uu leeyahay waa in ay aad u yar yihiin dadka wax qora ee "A-List" ee dadka kale ee wax qora ay tahay inay si fudud ugu tuuraan shukumaanka.
Haddii aad rabto inaad tagto "A-List" ee barta internetka, marka hore waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso waxa liiskaasi yahay. Adiga ayay kugu xiran tahay… Nick Nick ma aha, Technorati maahan, maahan Google, maahan Yahoo !, ma ahan Typepad ama WordPress. "A-List" laguma go'aaminayo tirada hits ee aad hesho, mugga bogagga bogga, abaalmarinnada aad heshay ama cadadka doollar ee ku jira koontadaada adsense. Hadday sidaas tahay, waxaa laga yaabaa inaad sababo khaldan u qori karto barta internetka.
Ku soo dhawow Douglaskarr.com, mid ka mid ah Akhrinta Weyn. (Waayahay, malaha sidaa uma fiicna)
Arrintu waa 'iskuulkii hore' ee xayeysiinta warbaahinta badan. Sharcigaasi wuxuu sheegayaa in inta badan indha-indheynta ay arkaan xayeysiintaada, sidaad u fiicantahay. Dugsigii hore wuxuu sheegayaa haddii aad helayso boqolaal kun oo bog-faallooyin ah, waxaad tahay guuleyste. Lamaane boqol ah waana inaad fashilanto. Waxaad ka mid tahay Akhriska Weyn. Waa si isku mid ah fekerka hoos u dhigaya Warshadaha Filimada, Warshadaha Wargeysyada iyo Telefishanka Shabakada. Dhibaatadu waxay tahay inaad qiimo weyn ku bixiso kubbadahaas indhaha, adigoon soo laaban. Dhibaatadu waxay tahay inaadan u baahnayn dhammaan kubbadaha indhaha, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad xayeysiiskaaga u gaadho baalasha indhaha midig.
"A-Liisteydu" uma dhigma Seth Godin, Tom Peter's, Technorati's, Shel Israel, ama Nick Carr. Ma doonayo milyan akhriste. Xaqiiqdii, waan faraxsanahay maadaama tirakoobyadaydu ay sii kordhayaan. Dabcan waxaan rabaa inaan kobciyo aqriska iyo haynta akhristayaasha boggeyga. Laakiin runtii waxaan kaliya xiiseeyaa dadka waawayn ee isku dhibaatooyinka qaba oo raadinaya xal isku mid ah sida aan ahay.
Anigu waxaan ahay nin-suuq-suuq-teknolojiyad-geek-Christian-aabe ah oo ku nool Indiana. Uma dhaqaaqi doono New York ama San Francisco. Ma doonayo inaan taajir noqdo (laakiin ma caban doono haddaan sameeyo!). Waxaan xiriir la leeyahay koox suuq geyn iyo tiknolojiyad ku leh gudaha iyo hareeraha Indianapolis. Waxaan baranayaa oo aan u bandhigayaa balooggeyga 'dadkeyga' (dhammaan lamaanaha darsin ama sidaas!). Aniguna waxaan la wadaagayaa waayo-aragnimadayda, fikirradayda, su'aalahayga, iyo macluumaadkayga dad badan oo xiisaynaya.
Waad aragtay, markaan faallo ka helo Shel Israel, Tom Morris, Pat Coyle, qoyskeyga, asxaabteyda, ama dadyowga kale ee aan ixtiraamo oo aan la wadaago… Hore ayaan ugu soo galay “A-List”. Haddii taasi aysan ahayn fikirkaaga ah "A-List", taasi waa caadi. Laga yaabee inaanan rabin inaan kujiro taada. Waxaan mid kastaa u aragnaa guusha si kala duwan.
Mid ka mid ah Akhriska Weyn
Agoosto 17, 2006 saacaddu markay ahayd 10:09 PM
waxaan u maleynayaa inaad si sax ah u tiri. dadku waxay u baahan yihiin inay halkaa ku cabiraan yoolalka laga filayo. mar ay taa gaadhaan, ilaa loolanka soo socda.
Agoosto 17, 2006 saacaddu markay ahayd 10:40 PM
Wadada loo maro - gebi ahaanba waan oggolahay.
Waxaan ku sameeyay fikrado kooban oo ku saabsan shirqoolkan A-lister naftayda.
Kudos weyn oo ku saabsan "suuq-geynta-teknolojiyad-geek-Christian-aabe dude" waxoogaa, btw. Si isku mid ah ayaan isku sharixi karaa!
Faallooyin aad u fiican iyo qoraal grwat ah. Waxaan wll xiriiri doonaa. Mahadsanid
Xusuusnowna, Ciise wuxuu wacdiyey kumanaan kun, laakiin wuxuu tababaray oo keliya 12. Kuwaas laba iyo tobnaadna way aamin ahaayeen. Oo bal eeg meesha ay martay !!